Twitter na-anwale ọrụ iji "mezie" ezigara tweets | Gam akporosis
Twitter na-anwale ọrụ iji "mezie" tweets
Otu n’ime nkà izizi a mụtara na sayensị kọmputa bụ oyiri, mado, na imegharị iwu. Ọrụ a bara uru karịsịa iji weghachite, ọ dịghị mgbe ọ bụla ka mma, mgbanwe ndị anyị mere na onyonyo ma ọ bụ akwụkwọ anyị na-amaghị. biaghachi ma ọ bụ na anyị chọrọ iwepu ya kpamkpam.
N'ime izu ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ bụ ọrụ na-abịa na Twitter dị ka Mpaghara. Na ọrụ ndị a, anyị ga-agbakwunye nke ọhụrụ nke a na-anwale ugbu a na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị ọrụ, ọ bụ mezie ọrụ, ọrụ nke chọrọ iji dochie ọrụ nke edezi edezilarị tweets.
Twitter na-arụ ọrụ na "Wepu zipu" oge maka tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0
Edezi tweets bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị chọọ site n'aka ndị ọrụ Twitter, Otú ọ dị, Jack Dorsey, CEO na onye guzobere ụlọ ọrụ ahụ, na-ekwu na n'oge ahụ a naghị ezube ime ya.
Ihe oru ohuru a bu onye engineer software Jane Manchun Wong achoputala ya, onye choputara oru aha ya bu Undo (Undo) oru nke ga-egosipụta maka sekọnd ole na ole nri mgbe biputere a tweet.
Jane enyebeghị ozi banyere ọrụ ya, ọ zigara GIF naanị na bọtịnụ egosipụtara iji kagbuo mbipụta nke tweet. Anyị amaghị, ee mgbe ịkagbu tweet, a ga-egosi tweet ọzọ maka edezi ma ọ bụ na anyị ga-edegharị ihe ọhụụ ozugbo.
Ọrụ ezighi ezi
Onye ọ bụla na-eji Twitter, Facebook ma ọ bụ netwọk mmekọrịta ọ bụla maara nke ọma -esi hichapụ a post, ya mere, njirimara a enweghị isi karịa ime ka ndị ọrụ chee echiche ugboro abụọ banyere ihe ịchọrọ biputere.
Ugbu a anyị amaghị ma ọrụ a ọ ga-abịa na mmelite n'ọdịnihu ma ọ bụ ọ bụrụ na nke ọzọ, ọ na-anọgide na ọrụ (nke ọtụtụ) a nwalere na obere ndị ọrụ yana n'ikpeazụ anaghị ahụ ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Twitter na-anwale ọrụ iji "mezie" tweets